Eyona algae ilungileyo kwi-aquariums: iimpawu kunye nendlela yokuzisebenzisa | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Izixhobo
I-algae ese-aquarium yingxaki, kuba azichaphazeli ukubonakala kwe-aquarium kuphela, kodwa ukuba azilawulwa, zichaphazela nempilo yeentlanzi kunye nezityalo. Nangona zininzi iindlela zokulawula i-algae, akukho nto iphosakeleyo ngokusebenzisa iiarhente ulwelwe oluchasene ne-aquariums ukusinceda sifeze lo msebenzi. Kukho iintlobo ngeentlobo zababulali bolwelwe lwasemanzini kwimarike, zonke zisebenza ngokukuko, kodwa kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba i-aquarium yethu inokuhlaselwa ziindidi ezahlukeneyo ze-algae. Nangona ezinye zisebenza ngokukhula kwe-algae eluhlaza kwi-aquarium, ezinye ziyasebenza kwi-cyanobacteria kwaye ezinye zine-algaecides ebanzi.
Kweli nqaku siza kukuxelela ukuba zeziphi ezona zinto zilungileyo zokulwa ulwelwe lwee-aquariums kwaye zeziphi iimpawu zabo eziphambili.
1 Olona hlobo lubalaseleyo lokulwa i-aquarium
1.1 I-Tetra AlguMin 250 ml
1.4 Ubomi obuLula-BLU0250 beAnti-Algae Blue Exit
1.5 Seachem Yandisa i-Excel
2 Yintoni ulwelwe kwi-aquarium
3 Kutheni ubulembu buvela kwi-aquarium
4 Yintoni anti-algae kwaye zisebenza njani
5 Indlela yokwenza ulwandle lwasekhaya
6 Olona hlobo lwe-anti-algae lwee-aquariums
7 Kuphi ukuthenga i-anti-algae engabizi
Olona hlobo lubalaseleyo lokulwa i-aquarium
Umnatha we-Aquarium Klear -...
I-JBL-Algae icocekile ...
Isicoci saManzi seJBL ...
I-Tetra AlguMin 250 ml
Le anti-algae yee-aquariums Kuyanceda ukuphelisa naluphi na uhlobo lobulembu ngokukhawuleza, ukuthintela ukuvela kwakhona. Ukuba i-algae sele isanda kubalulekile ukuba uthathe amanyathelo ngokukhawuleza. Le mveliso ibangela ukuba isithako sikhutshwe ngokukhawuleza kwaye sineentshukumo ezikhawulezayo. Kuyafana nokusasazwa kwesithako kwi-aquarium yonke. Enkosi ngemo yayo engamanzi inokusasazwa kakuhle kuyo yonke i-aquarium ukuze ihlasele yonke ingqumbo. Ifanelekile kuzo zonke ii-aquariums zamanzi amatsha.
Inayo into enokubangela ukuba uxabane nomzimba wakho. Kuyingozi kwizinto eziphilayo zasemanzini kwaye ezi ziphumo zihlala ixesha elide. Kuyacetyiswa ukuba usoloko ufunda ilebheli ngaphambi kokuyisebenzisa ukwenza izinto zilunge.
Le anti-algae yee-aquariums isetyenziselwa abo banamanzi amatsha. Inceda ekupheliseni phantse zonke iintlobo ze-algae kwaye ingumthombo olungileyo wekhabhoni kwizityalo. Inkulu Ukukwazi ukubonelela ngekhabhoni efunekayo kwizityalo ukwenzela ukwandisa isisombululo se-nitrate. Kungenxa yokuba ikhompawundi eyenziwe ngayo le anti-algae yonakala kwaye inceda izityalo zethu ukufunxa iitrate.
Ukusetyenziswa kakhulu kwale mveliso kukuba isetyenziselwa ukuthintela kunye nokuphelisa i-algae, yiyo loo nto isetyenziswa ikakhulu. Sebenza nazo zonke iintlobo ze-algae kubandakanya i-cladophora. Olu hlobo lwe-algae ngamanye amaxesha lunokucaphukisa kwaye kube nzima kakhulu ukususa. Yimveliso engenabungozi kwaphela kwintlanzi nakwizilwanyana ezingenamqolo. Kwenzeka into efanayo nakwizityalo, kuba ayinabungozi. Idosi iya kuxhomekeka kuxinzelelo lwe-algae onayo kwi-aquarium.
Yimveliso eneereferensi ezilungileyo kubasebenzisi abangazisebenzisanga. Nangona inokuphelisa i-algae kakuhle, zonke izinto ezenza ukuba ziqhubeke nokukhula kufuneka zilungiswe. Kubalulekile ukuba ubhale iileyibhile ngokufanelekileyo ngaphambi kokuyisebenzisa ukuze isetyenziswe ngokuchanekileyo. Inokuba yingozi kwezinye izinto eziphilayo. Ke ngoko, kufuneka wazise ngaphambi kokuyisebenzisa. Nangona kunjalo, ukusebenza kwayo kuphezulu kakhulu kwaye kunexabiso elithengekayo.
Ukuba utyando luchanekile, kukhuselekile kwintlanzi nakwizilwanyana kwaye ayizukuvelisa naluphi na uhlobo lweziphumo ebezingalindelekanga. Kuyacetyiswa ukuba uyisebenzise kusasa, emva kotshintsho oluncinci lwamanzi ubuncinci i-30%, xa imveliso ikwindawo entle yeoksijini. Isizathu kukuba ngokususa i-algae, zithotyiwe ziintsholongwane ezisebenzisa ioksijini eninzi.
Ubomi obuLula-BLU0250 beAnti-Algae Blue Exit
Yimveliso ebonakalise ukusebenza kwangaphambili kwaye isusa i-algae ngesantya esiphezulu. Inefomathi engamanzi ukuze ikwazi ukuhanjiswa kakuhle kwi-aquarium kwaye ifikelele kwikona nganye. Nangona kunjalo, kufuneka siqhubeke ukulawula kakuhle zonke izinto eziguquguqukayo ngaphakathi kwi-aquarium ukuze ukwanda kwe-algae kumiswe ngokusisigxina.
Ubomi obuLula BLU0250 ...
Lunyango lweentsuku ezintlanu, apho 1 ml yemveliso yongezwa kwiilitha ezisibhozo ze-aquarium. Ngaphambili, ukuba sivule isihluzi, kuye kwafuneka sisuse ikharbon esebenzayo kwifilitha. Ukuthintela ukuvela kwakhona kwe-algae eluhlaza, yongeza idosi kube kanye ngeveki. Ayinabungozi kuzo zonke izinto eziphilayo ze-aquarium kwaye ayizukuchaphazela iintlanzi, i-shrimp, ii-invertebrates okanye izityalo.
Seachem Yandisa i-Excel
Phakathi kwe-anti-algae ye-aquariums inokusetyenziswa njenge Umthombo olungileyo wekhabhoni ekhoyo yezityalo. Ingasetyenziselwa enye indlela yokujova i-carbon dioxide ukuze izityalo zikwazi ukwenza ifotosinthesisi kakuhle. Ukongeza, inokususa i-algae ngokufanelekileyo. Uncedo ngaphezu kwezinye iimveliso kunokuba kunceda ukwazisa ngeefotosinthesisi eziphakathi ukuze impilo yezityalo ze-aquarium ibengcono kakhulu.
Seachem Yandisa i-Excel -...
Kuxhomekeka ekubeni sifuna isetyenziselwe ukukhula kwezityalo okanye njenge-anti-algae, injongo yahluke ngokupheleleyo. Ayisiyiyo kuphela imveliso ukutshintsha, kodwa nendlela esetyenziswa ngayo. Njenge-anti-algae, kufuneka isetyenziswe ebusuku kuba izityalo kunye ne-algae zibuthathaka ekupheleni kwexesha lokukhanya.
Yintoni ulwelwe kwi-aquarium
Ulwelwe lwe-Aquarium zihlala zizityalo ezineseli enye ezibonakala kwi-aquarium ngenxa yezinye Uhlobo lokungalingani, ngokubanzi luhambelana nokukhanya okugqithileyo, iitrate kunye / okanye iifosfathi. Kwiimeko zokungalingani, i-algae ngokukhawuleza ihlala kuyo nayiphi na i-aquarium.
Kukulungele ukuhlala siphaphile ngalo lonke ixesha ukuze kungabikho ukungalingani okusinika iintloko. Into yokuqala ekufuneka yenziwe kukusebenzisa iimvavanyo ezifanelekileyo ze-aquarium ukuze ujonge umgangatho wamanzi rhoqo. Rhoqo, i-aquarium iyasinyanzela ukuba senze imisebenzi yolondolozo, enje ngotshintsho lwamanzi ukuphelisa ezinye ze-nitrate ezingenakupheliswa yinkqubo yokuhluza i-aquarium: izityalo, iziqwengana, iifilitha, njl. Ukucoca okufanelekileyo kunokukunceda nokukhusela ukukhula kwe-algae.
Kutheni ubulembu buvela kwi-aquarium
Kulula ukuba i-algae ivele kwi-aquarium ukuba iimeko azizinzanga. Ngokwesiqhelo kuhlala kubangelwa kukukhanya okugqithileyo kwindawo eyayikuyo i-aquarium, ngenxa ye-nitrate okanye iiphosphates ezingaphezulu kwizichumiso ezisetyenziswa kwizityalo. Konke oku kunokulawulwa ngococeko olululo kunye nokusetyenziswa kakuhle kweefilitha.
Yintoni anti-algae kwaye zisebenza njani
I-anti-algae esetyenziswa kwi-aquarium yimveliso yeekhemikhali ezinokuthintela kunye nokuphelisa ukubonakala kwe-algae, ukuthintela ukukhula kwayo ngokukhawuleza, kwaye kungonzakalisi abanye abahlali be-aquarium. ezifana nezityalo, intlanzi, iimollusk kunye nayo nayiphi na into encinci. Zihlala zisetyenziswa kwifomathi yolwelo ukuze ikwazi ukufikelela kuzo zonke iimbombo ze-aquarium kwaye isebenze ngokukhawuleza. Nje ukuba isasazekile, eyona nto ibalulekileyo kukuyenza kwaye iqhubeke nokugcina iimeko ezilungileyo ngaphakathi kwetanki.
Indlela yokwenza ulwandle lwasekhaya
Enye yeendlela zokwenza i-anti-algae eyenziwe ekhaya kukusebenzisa umququ. Ingca ityhefa amanzi ngombala ocacileyo wokukhanya kwaye ayivumeli ukukhanya ukuba kungene, okuthanda ukukhula kwe-algae. Njengoko ubona, le yindlela yendalo yokuphelisa i-algae, ngexabiso eliphantsi kwaye ilula.
Kuya kufuneka ulumke xa uthatha izinto zokwenza imveliso, kuba ngelishwa amasimi azele yimveliso yezempilo. Kuba sithetha ngento yendalo, kufuneka ulawule ukubola kwayo. Ngamanye amagama, xa ithe shwaka, ibuya ithathe ngaphezulu, ilula.
Olona hlobo lwe-anti-algae lwee-aquariums
Ezi ntlobo zeemveliso zininzi kwintengiso kwaye zininzi iintlobo onokukhetha kuzo. Masishwankathele ukuba zeziphi ezona zinto zilungileyo zokulwa nolwandle:
I-Seachem Excel anti-algae: Yeyona nto yamkelweyo kwaye iyasebenza kwimarike. Ukongeza, inenjongo ezimbini kuba inokusetyenziswa njenge-carbon dioxide engamanzi kunye nesichumisi kwizityalo ze-aquarium. Kwangelo xesha, iya kuba yinto esebenzayo yokulwa ulwelwe ngendlela efanelekileyo. Kuqala kufuneka uqhelane nokuyisebenzisa ukulungelelanisa ukugxila kuxhomekeke kwinjongo wento ofuna ukuyisebenzisa.
Ubomi obulula bokulwa ne-algae: Olu hlobo luneemveliso ezimbini ezahlukeneyo ezenzelwe ulwelwe oluhlaza kunye nolwelwe oluhlaza kunye necyanobacteria. Ke ngoko, kuxhomekeke kwingxaki onayo kwi-aquarium yakho, ungasebenzisa enye imveliso okanye enye.
I-JBL ye-Aquarium Algae: le nkampani ineemveliso ezisemgangathweni ophezulu kwaye kufanelekile ukuba zityalwe. Zonke zinereferensi elungileyo yokusebenza ngokufanelekileyo kwaye ayinabungozi kwi-aquarium.
Kuphi ukuthenga i-anti-algae engabizi
Amazon: unokufumana uninzi lweemveliso ezichasene ne-algae. Uncedo olunayo iAmazon ngaphezulu kwezinye iivenkile kukuba zinentlobo ngeentlobo zeemveliso kunye namaxabiso. Bahlala benamaxabiso anexabiso eliphantsi kwimarike iphela.
Kiwok: Ukuba yindawo yokugcina izilwanyana zasekhaya ngokugqwesileyo, unokufumana zombini kunye nevenkile ezikwi-Intanethi. Kuzo zombini unokufumana iintlobo ezahlukeneyo zeemveliso ezikumgangatho ophezulu kwaye kunenzuzo yokuba kwiivenkile ezibonakalayo unokucetyiswa ngabasebenzi ukuba umtsha kwilizwe le-aquarium.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga ne-anti-algae yee-aquariums kunye nendlela ezisetyenziswa ngayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » Ulwelwe lwe-Aquarium
Isihluzo se-Osmosis se-aquarium, yonke into ekufuneka uyazi
Izibane ze-UV zamanzi